SEMALT को साथ तपाइँको साइट मोबाइल बनाउने
मोबाईल मैत्री हुनु भनेको के हो?
कसरी थाहा पाउने यदि तपाइँको साइट मोबाइल मैत्री छ वा छैन
के प्रतिक्रियाशील डिजाईन मोबाइल-अनुकूल डिजाइनको जस्तै छ?
कसरी तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को मोबाइल मैत्री बनाउन सक्नुहुन्छ
विश्वको 50०% भन्दा बढी वेब ट्राफिक मोबाइल उपकरणहरूबाट आउँदछ र यो संख्या प्रत्येक बर्ष बढ्दै जान्छ। साथै, सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको %०% सँग स्मार्टफोन छ। यदि तपाइँको वेबसाइट र यसको सामग्री मोबाइल अनुकूल छैन, तपाइँ निश्चित रूप मा सम्पूर्ण ट्राफिक मा गुमाउनु भएको छ र यसले तपाइँको ट्राफिकको ब्लो साथै अवरुद्ध हुन सक्छ Google TOP मा तपाइँको रैंकिंग।
यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईंको वेबसाईट र मोबाइलको लागि यसको सामग्री अप्टिमाइज गर्नुहोस् किनकि गुगलले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यो मोबाइल-मैत्री पृष्ठहरूको साथ आफ्नो मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको सेवा गर्न चाहन्छ।
मोबाइल-मैत्री साइट वा सामग्रीको सरल अर्थ भनेको तपाईंको वेबपृष्ठहरूमा सामग्री डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटरमा मात्र नभई मोबाइल उपकरणहरूमा सजिलै उपभोग गर्न मिल्छ।
तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईंको साइटले मोबाइल-अनुकूल साइट भनिनको मापदण्ड पूरा गर्दछ। यी मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि Google साइटहरूमा प्रतिबन्धित प्रतिबन्धहरू हटाउन आवश्यक छ जुन यसको मोबाइल मित्रता मागहरू अनुरूप छैन।
गुगलसँग आफ्नै मोबाइल मैत्री परीक्षण उपकरण छ जुन तपाईं सजीलै मोबाइल-मित्रताका लागि तपाईंको साइट परीक्षण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक परिक्षण सकिएपछि यसले तपाईको साइटलाई यसको मोबाइल मित्रता स्तर अनुसार ग्रेड दिन्छ।
ठीक छ, तथ्यहरू सिधा लिनुहोस्। तपाईंले सायद यो शब्द देखेको वा सुन्नुभएको हुन सक्छ, "उत्तरदायी" डिजाइन "मोबाइल-अनुकूल" डिजाइनको साथ आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग गरियो। यो, तथापि, प्राविधिक रूपमा सही छैन।
उत्तरदायी डिजाइन प्रयोग गरी मोबाइल मैत्री साइट बनाउने अन्य तरिकाहरू मध्ये एक मात्र हो। एक वेबसाइट उत्तरदायी हुनको लागि, यसको मतलब साइटको सामग्री सँधै जुनसुकै स्क्रिनको आकारलाई हेरिएको छ भने यो मिलाउन समायोजित हुनेछ। यो मोबाइल मैत्री साइटहरु को लागी सबै भन्दा लोकप्रिय प्रविधि हो।
यदि तपाइँको वेबसाइट पहिले नै माथि छ र चलिरहेको छ वा यदि तपाइँ केवल एक निर्माण गर्न लाग्नुभएको छ भने, यसलाई मोबाइल-मैत्री बनाउने शीर्ष प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
कृपया यो दिमागमा राख्नुहोस् कि यस पोष्टमा साझेदारी गरिएका धेरैजसो सुझावहरूले मोबाइल-अनुकूल पृष्ठहरू सिर्जना गर्ने प्रतिक्रियाशील डिजाइन विधिलाई मन पराउँछन्। भनिएको छ, यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गर्नुहोस् (वा केस पुन: डिजाइन गर्नुहोस् जस्तो हुन सक्छ)।
पाठको ठूलो ब्लकहरू प्रयोग नगर्नुहोस्: तपाइँको मोबाइल वेबसाइट स्क्रिनमा टेक्स्टको मात्रा कम गर्न यो तपाइँको उत्तम हित हो। अवश्य पनि, तपाईलाई तपाईको सन्देश तपाईका आगन्तुकहरूलाई पठाउन शब्दहरू चाहिन्छ तर पाठका ठूला ब्लकहरू अति नै भारी हुन्छन् र पढ्न गाह्रो देखिन्छ।
यदि तपाइँ अनुच्छेदहरू धेरै लामो छन् भने तपाइँ टाढा आगन्तुकहरूलाई डराउन सक्नुहुनेछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो वाक्य र अनुच्छेदहरू छोटो छोटो राख्न आफ्नो पाठकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
सहि फन्ट (हरू) प्रयोग गर्नुहोस्: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं फन्टहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको मोबाइल साइटमा स्पष्ट र पढ्न सजिलो छ। तपाईं एक फन्ट चाहनुहुन्न जसले आगन्तुकहरूलाई तपाईंको सामग्रीहरू पढ्न आँखा तान्छ। सहि फन्ट चयन गर्नु तपाईंको वेब डिजाइन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको फन्ट विकल्प र तपाईंको पाठ व्यवस्थित तरीका तपाईंको साइट दृश्यात्मक अपील वा भयावह बनाउने शक्ति छ। तपाईं पाठ अलग गर्न फन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरण को लागी, तपाई हेडर, शीर्षक वा सबटोपिक्स प्रस्तुत गर्न बोल्ड फन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जबकि पाठको मुख्य भागका लागि नियमित आकारको फन्ट प्रयोग हुनेछ।
तपाईंको गति बढाउनुहोस्: अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि करीव 53 53% व्यक्तिहरूले मोबाइल वेबसाइटलाई त्याग्नेछन् जुन लोड हुन seconds सेकेन्ड भन्दा बढी लिन्छ। तपाईको मोबाईल वेबसाइट लोड गर्न जति लामो समय लिन्छ, तपाईको बाउन्स रेट तपाईको उच्च हुन्छ र अन्तत: तल्लो तपाईले Google TOP मा रैंक गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको पृष्ठ लोड समयलाई सकेसम्म कम राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको डिजाईन सरलीकरण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि अनावश्यक भारी छवि वा कोड बेवास्ता गर्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको वर्तमान पृष्ठ गति Semalt को प्रयोग गरी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क वेब एनालिटिक्स उपकरण। यसले तपाइँलाई तपाइँको पृष्ठ गति स्कोरहरू दुबै डेस्कटप र मोबाइल यन्त्रहरूको लागि देखाउँदछ। उपकरणले तपाइँको गति मा सुधार गर्न के गर्न भनेर तपाइँलाई पनि बताउँछ।
तपाईंको मेनू सरल बनाउनुहोस्: डेस्कटपको लागि वेबसाइट डिजाईन गर्दा त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाई पछि टाढा हुन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, मोबाइल उपकरणहरू उनीहरूको साना स्क्रिनहरू भएको कारणले क्षमा दिन सक्दैन।
तपाइँ चाहनुहुन्न कि तपाइँका आगन्तुकहरू सँधै स्क्रोल गर्नुहोस् वा जुम इन र आउट गर्नुहोस् तपाइँको मेनु विकल्पहरूमा छनौट गर्न।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सम्भव विकल्पहरूको कम से कम संख्यामा तपाईंको सम्पूर्ण वेबसाइटलाई सरलीकृत गर्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै विकल्पहरू स्क्रीनमा फिट छन् र पर्याप्त देखिन्छन्। तपाईंको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र प्रयोगकर्ताहरूको लागि मेनू विकल्पहरू सरल पार्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कसैलाई लामो फारम मनपर्दैन: प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको मोबाइल साइटमा उनीहरूको जानकारी दिंदा कर फारामहरू भरेजस्तो महसुस नगर्नुहोस्। लामो फारमहरू भर्न डेस्कटप साइट प्रयोग गर्दा यो बोझिल नहुन सक्छ, तर यो सानो स्क्रिनमा गर्न पक्कै पनि भारी हुनेछ।
यदि तपाइँका फारमहरू धेरै लामो छ भने, तपाइँले तिनीहरूलाई पुन: डिजाइन गर्ने विचार गर्नुपर्नेछ। तपाईंको फारममा हेर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईंलाई वास्तवमै प्रत्येक रेखा चाहिन्छ भने। उदाहरण को लागी, यदि तपाई प्रयोगकर्ताहरु लाई उत्पादन किन्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, केवल तिनीहरुको बिलि and र शिपिंग जानकारी पर्याप्त छ - उनीहरुको शौकको लागि नसोध्नुहोस्।
तथ्यको रूपमा, अधिक शपिंग कार्ट त्यागको शीर्ष कारण एक विस्तारित र जटिल चेकआउट प्रक्रिया हो।
तपाईंको CTA हरू स्पष्ट रूपमा देख्न दिनुहोस्: तपाईको मोबाईल साइटबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि तपाईका कल-टु-एक्शन बटनहरू धेरै देखिने छन् भनेर निश्चित गर्नुहोस्। प्रदर्शनमा एक भन्दा बढि CTA मार्फत तपाईंको आगन्तुकहरूलाई बम नफर्काउने प्रयास गर्नुहोस् - याद गर्नुहोस् यो पटक यो एउटा सानो स्क्रिन हो।
प्रत्येक पृष्ठ को लागी, यसको प्राथमिक लक्ष्य (नयाँ सदस्यता, खरीद, डाउनलोड, आदि) को बारे मा सोच्नुहोस् र तपाइँको CTA त्यो लक्ष्य मा ध्यान दिनुहोस् कि पृष्ठ को लागी।
यस तरिकाले तपाईं आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि हुनुहुनेछ किनकि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि% 53% वेबसाइटहरूमा सीटीए बटनहरू छन् जुन सजीलै seconds सेकेन्ड वा कममा पहिचान हुन सक्दैन।
एक खोज समारोह जोड्नुहोस्: कहिलेकाँही तपाइँसँग तपाइँको साइट मा धेरै विकल्पहरू हुन आवश्यक पर्दछ। यो विशेष गरी ई-वाणिज्य वेबसाइट को लागी सही हो।
जबकि यो सत्य हो कि धेरै विकल्पहरू भएको कारण आगन्तुकहरूको लागि भ्रम पैदा हुन्छ र नकारात्मक रूपान्तरणलाई प्रभाव पार्छ, तपाईंको वेब डिजाइनमा खोजी कार्य समावेश गर्दा उनीहरूको लागि चीजहरू सरल गर्दछ।
खोजी पट्टी थप गर्नाले प्रयोगकर्ताहरूलाई जटिल मेनुमा नेभिगेट गर्नु पर्ने तनावबाट बच्न मद्दत गर्दछ किनकि उनीहरूले खोजिरहेका कुरा ठ्याक्कै टाइप गर्न सक्दछन्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि ग्राहक समर्थन स्पष्ट देखिन्छ: यदि तपाइँको मोबाइल आगन्तुकहरु तपाइँलाई सहयोगको लागि सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्दैनन् जब तिनीहरु मुद्दाहरूमा भाग लिन्छन्, यसले तपाइँको व्यवसायलाई नराम्रो प्रतिष्ठा दिन्छ।
तपाइँ तपाइँको साइट मा एक दृश्य ठाउँमा प्रत्येक प्रासंगिक सम्पर्क जानकारी प्रदान सुनिश्चित गर्नु पर्छ, ताकि तपाइँको आगन्तुकहरु चाँडै तपाइँको ग्राहक सेवा टीम को लागी पहुँच प्राप्त गर्न सकीन्छ।
बटनहरू पर्याप्त ठूला छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्: यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट बटन डिजाइन पर्याप्त ठूलो हो ताकि यसलाई सजिलै औंलाले टेप गर्न सकीन्छ। याद गर्नुहोस् यो डेस्कटपको ठूलो स्क्रिन होइन जहाँ नेउगेशन माउस वा किबोर्डको साथ गर्न सकिन्छ।
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको% users% उनीहरूको स्क्रीनहरूमा ट्याप गर्न उनीहरूको थम्ब प्रयोग गर्दछन्, त्यसैले बटनहरू र अन्य क्लिक योग्य तत्वहरू पर्याप्त ठूलो हुनुपर्दछ।
साथै, मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पर्दाको कुनामा पुग्नको लागि यो निकै गाह्रो छ - त्यसैले आफ्ना बटनहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण तत्वहरूलाई पर्दाको बीचमा राख्न सुझाव दिइन्छ।
पप-अपबाट छुटकारा पाउनुहोस्: यसको सामना गरौं, पप-अपहरू विशेष गरी मोबाइल साइटमा त्रासदायक हुन्छन्। याद गर्नुहोस् अधिकांश व्यक्तिले आफ्नो थम्बहरू मोबाइल वेबपृष्ठहरू नेभिगेट गर्न प्रयोग गर्छन्, पप-अपहरू बन्द गर्न प्राय: गाह्रो हुन्छ किनकि डेस्कटप वा ल्यापटप स्क्रिनमा देखा पर्ने सानो "x" बटन मोबाइल स्क्रिनमा अझ सानो हुनेछ।
धेरै चोटि, आगन्तुकहरू पनि दुर्घटनावश विज्ञापनहरू क्लिक गर्छन् उनीहरूलाई बन्द गर्न को लागी प्रयास गर्दा - तिनीहरू पूर्ण रूपमा अर्को पृष्ठमा अवतरण हुनेछन् - यसरी तिनीहरूको प्रयोगकर्ता अनुभव बर्बाद गर्दछन्।
यदि तपाईंले पप-अपहरू सबै मुल्यमा प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, तपाईं या त सम्भव भएसम्म फारमहरूलाई सरल बनाउन कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ वा दोस्रो विकल्प केवल पप-अपहरू प्रयोग गर्नु हो जब एक आगन्तुकले यसमा क्लिक गर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट को एक नया डिजाइन होने विचार गर्नुहोस्: यदि तपाइँको साइट राम्रोसँग स्थापित छ भने, यो धेरै सम्भाव्य नहुन सक्छ किनभने तपाइँको धेरै दर्शकहरू तपाइँको वेबसाइट डिजाइनमा प्रयोग गरिएको छ। तर यदि तपाइँको वेबसाइट अपेक्षाकृत नयाँ छ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट पुन: डिजाइन गर्दा तपाइँ एक उत्तरदायी विषयवस्तु प्रयोग गर्न कोशिस गर्नुपर्नेछ। Semalt सँग एक उत्तम वेब विकास टोली छ जुन तपाइँको वेबसाइटलाई पुन: डिजाइनमा मद्दत गर्न सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि "चौडाई" सँधै प्रतिशतको शर्तमा हुन्छ: यो समय अलि प्राविधिक हुने समय हो। यदि तपाईं कुनै पनि वेबपृष्ठ तत्वमा ठीक क्लिक गर्नुहुन्छ र "तत्व तत्व निरीक्षण गर्नुहोस्" (गुगल क्रोमका लागि) छनौट गर्नुहुन्छ भने, एउटा प्यानल देखा पर्नेछ।
बायाँपट्टी विन्डोको एलिमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सम्बन्धित मानहरू दायाँ विन्डोमा देखिनेछ। तपाईंले "चौडाई" को लागि मान देख्नु पर्छ जुन पिक्सेल वा प्रतिशतको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले प्रतिशतको सर्तमा सेट गर्नुभयो भने, ती तत्वहरूको चौडाइ स्क्रिन आकार परिवर्तन हुने बित्तिकै समायोजन हुनेछ।
मिडिया क्वेरीहरू प्रयोग गर्नुहोस्: तपाईं अझै पनि तत्वहरूको चौडाइका लागि पिक्सेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई मिडिया क्वेरीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे थाहा छ। र मिडिया क्वेरीहरू प्रयोग गर्नु उत्तरदायी डिजाइनहरूको लागि महत्वपूर्ण हो।
तपाईंले गर्नुपर्ने सबै निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ कि तपाईं कसरी साइटलाई विभिन्न स्क्रीन आकारहरूमा व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण केहि पृष्ठहरू पुनःआकार दिइयो र स्क्रिन आकार परिवर्तनको रूपमा पुनः आकार पनि ल्याइनेछ।
तपाईंलाई वास्तवमै सबै टेक्न सामग्रीको आवश्यक पर्दैन यदि तपाईं एक राम्रो विषयवस्तु किन्नुहुन्छ वा तपाईं Semalt जस्ता उत्कृष्ट वेब विकास कम्पनीको सेवाहरू भाँडामा लिनुहुन्छ जसले तपाईंको वेबसाइट सबैभन्दा नयाँ मोबाइल-मैत्री र SEO रणनीतिहरूको साथ निर्माण गर्दछ।
एक मोबाईल मैत्री साइट को लागी तपाईलाई अधिक यातायात प्राप्त गर्न को लागी मद्दत गर्दछ तपाइँ सम्भवतः आफ्नो समग्र Google TOP रँकि। प्राप्त गर्न र सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाईंको ब्यापारको लागि बढि रूपान्तरण दरहरू। यस साइटका सुझावहरू अनुसरण गर्नुहोस् तपाईंको साइटलाई मोबाइल अनुकूल बनाउनुहोस् र तपाईंको वेबसाइटले प्रस्ताव गरेको पूरा फाइदाहरूको आनन्द लिनुहोस्।